Cloudy G3, ny Rom tsara indrindra amin'ny LG G2 | Androidsis
Ny nampanantenako anao tamin'ny androny fony aho nanao ny fitsapana fampitahana na hafainganam-pandeha izay ny LG G2, maodely D802 na iraisam-pirenena, ny LG G3 maodely iraisam-pirenena D855 dia nokapohina ara-bakiteny. Androany dia tiako aseho ilay iray ho ahy sy ho an'ny mpampiasa maro Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2.
Ny Rom dia tsy iza fa ny Cloudy G3 1.2 V2 nozaraina tao amin'ny Forum fifanakalozana HTC Mania Android, izay horesahiko ato amin'ity lahatsoratra vaovao ity ny toetra tsara ao aminy sy ny manitsy dingana dingana tsikelikely.
1 Inona no atolotry ny Rom Cloudy 1.2 V2 ho antsika?
2 Ahoana no fomba fametrahana ny Rom Cloudy G3 1.2 V2 amin'ny LG G2?
3 Rom Cloudy G3 1.2 V2 fomba fametrahana
Inona no atolotry ny Rom Cloudy 1.2 V2 ho antsika?
Ny toetra lehibe ananan'ity Rom manaitra ho an'ny maodely iraisam-pirenena LG G2 antsika ity, heverin'ny maro Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 androany, dia ny hanomezana ny endrika rehetra sy ny mampiavaka ny faran'ny terminal farany avy amin'ny LG, ilay zokilahy LG G2, LG G3.
Miaraka amin'ity Rom ity, ankoatry ny fahazoana a fahombiazana farany terminal ary a fanjifana bateria amin'ny tsara indrindra hitakoNa dia mamono ny Stock Roms tany am-boalohany aza, ankoatr'izay dia hanana ny safidy sy ny fiasan'ny LG G3 nohahetsika sy miasa tanteraka isika, eny fa na dia ny fiasan'ny tranga Quick Circle aza.
Eo anelanelan'ny endri-javatra na Fampiharana LG G3 manokana azontsika atao ny manasongadina fa afaka manonona manokana an'ireo:
Android 4.4.2 Original LG G3 KitKat.
Fakan-tsary LG G3 tany am-boalohany miaraka amin'ireo asany miasa rehetra.
Fampiharana mozika LG G3 azy manokana.
Quick Memo ao amin'ny kinova farany natokana natao ho an'ny LG G3.
Navoaka ny fikandrana roa.
Fampiharana hafatra an'ny LG G3.
Ahoana no ilazako aminao sy asehoko anao amin'ny horonantsary, mandra-pahatongan'ny ny fiasa voajanaharin'ny fonon'ny Quick Circle Izy ireo dia navitrika sy miasa tanteraka ao amin'ity Rom ity, safidy ahafahantsika miditra amin'ny mozika tsy mila manokatra ny sarony, na ny lisitry ny hafatra, miantso log, fakantsary miaraka amin'ny safidy haka sary haingana na LG G Health afaka sy miasa tanteraka .
Ahoana no fomba fametrahana ny Rom Cloudy G3 1.2 V2 amin'ny LG G2?
Mametraka an'ity Rom manaitra ity, noheverina ho Rom tsara indrindra amin'ny LG G2 amin'izao fotoana izao, Mila manana modely iraisam-pirenena LG G2 fotsiny isika, izany hoe ny maodely D802, izay tsy maintsy misy Miorim-paka ary ao anatin'ilay fanarenana nohavaozina, mba ho afaka ny TWRP Amin'ny dikan-teny farany.
Ho fanampin'izay, tsy maintsy manana, ho fepetra fiarovana, a fampirimana EFS backup, ary koa backup na nandroid backup ny rafitray ankehitriny rehetra raha sanatria ka tianay ny mamadika ny fizotrany.
Ny rakitra ilaina amin'ny fampandehanana ny Rom dia voafetra amin'ny fisie roa voafintina ao anaty endrika zip, iray amin'ny Rom tenany izay azonao sintonina avy eto ary ny iray kosa miaraka aminy KitKat baseband ho an'ny LG G2 de azonao sintonina eto. Raha vantany vao alaina ireo rakitra roa dia alainay izy ireo nefa tsy decompressing amin'ny foton'ny sdcard an'ny LG G2 ary mamerina amin'ny laoniny fanarenana izahay hanohy ny Fametrahana Rom sy fizotra flashing.
Rom Cloudy G3 1.2 V2 fomba fametrahana
Hamafana isika ary ao anatiny dia mifidy ny safidy hamafana mandroso hanamarihana ny safidin'ny: dalvik, cache, system ary data.
Hametraka sy hisafidy ny baseband KitKat isika ary hamindra ny bara fametrahana.
Miverina amin'ny safidy fametrahana izahay ary misafidy ny zip Rom ary mametraka azy amin'ny alàlan'ny famindrana ny bara indray.
Ankehitriny dia hanaraka ny torolàlana aseho ao amin'ny installer automatique Aroma Installer isika, torolàlana feno sary izay ahafahantsika misafidy hevitra sy fampiharana samihafa hampidirina ao amin'ny fametrahana ny Rom.
Miaraka amin'izany Efa manana ny Cloudy G3 1.2 V2 napetraka tsara ianao ao amin'ny LG G2 vaovao anao, izay ho ahy sy ho an'ny mpampiasa maro dia Rom tsara indrindra ho an'ny Lg G2 misy fahasamihafana be eo amin'ny hafa.
Fanamarihana: Rehefa miteny aho ao amin'ny horonantsary fa tsy nasiana fihodinana, Te-hijery ny Launcher an'ny LG manokana aho fa amin'ity kinova ity ho an'ny LG G3 dia nesorin'izy ireo ny fiasan'ny fahafahany mihetsika ny fihodinan'ny Launcher mihitsy. Ho an'ny ambiny, ny fihodinana dia miasa tanteraka amin'ny rindranasa rehetra, ny rafitry ny rafitra na koa ao amin'ny Launcher raha misintona iray miaraka amin'ny fanohanan'ny fihodinan'ny efijery isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ny Rom tsara indrindra ho an'ny LG G2 dia antsoina hoe Cloudy ary seranan-tsambo an'ny LG G3
Salama. Te hahafantatra aho raha hanao horonantsary momba ny fanaovana azy ianao.
Horonantsary tsara rahateo, hitanao fa manao ezaka ho an'ireo mpamandrika sy mpitsidika ity pejy ity izy.
Misaotra namana, arahaba.
Manontany anao aho raha mieritreritra ianao fa hisy cloudyg3 ho an'ny lgg2 nohavaozina ho lollipop, dia ny nijereko horonan-tsary hametahana lollipop cm12 ary ny marina dia tiako kokoa ilay rom cloudyg3 ary tokony ho fantatrao raha mieritreritra ianao fa hisy izany ho fanavaozana vaovao, fiarahabana ary tiako ny asa ataonareo
Salama, nametraka ny rom tao anaty lg g3d722p aho ary novonoina ilay cel ary maty izy, tsy afaka miditra amin'ny mode emergency aho na izay azonao ampiana ahy misaotra
Francis Ortiz dia hoy izy:
Ry namako, niteraka "biriky" tamin'ny findainao ianao, ity ROM izay resahina ato amin'ity forum ity dia ho an'ny LG G2 ihany, mamporisika anao aho hijery ireo tutorial YouTube momba ny fomba "hamongorana" ireo fitaovana LG, antenaiko fa afaka mamaha ny olanao ianao. Miarahaba.
Valio amin'i Francisco ortiz
VANONAO VE IZANY?
Valiny amin'i BRAYAN
Salama Francisco, tamin'ity herinandro ity aho dia nahazo LG G2 niaraka tamin'ny G3 Cloudy rom, manana fangatahana aho, rehefa manokatra ny kisary contact, tab Contact, ny safidy fikarohana (Magnifying vera) dia toa tsy miasa, izay ahafahanao mahita ilay fifandraisana fotsiny amin'ny fanoratana litera vitsivitsy Ahoana no ahafahako mampandeha azy sa inona ny tetika hampiharina? Misaotra
Francisco Ortiz dia hoy izy:
Salama namana Horacio, ny olana mahazo anao dia mety "bug" an'ny ROM, ny soso-kevitro dia ny fiandrasana fanavaozana ny voalaza hoe ROM dia alao izy, na raha hainao ny mamafa sy mameno ny ROM indray, mety ny olanao. Miarahaba…
Mety ho anao izany… Ho averiko indraindray ny famerenako ny saiko ary nisafidy ny OptimusRs G3 aho, izay mandeha tsara kokoa.
Saingy mijanona miaraka amin'io kinova 4.4.2 io na havaozina amin'ny kitkat 4.4.4
Saika ny Roms masaka rehetra dia nohavaozina amin'ireto Android manaraka ireto ho fanampin'izany, satria ny Rom no ampiasako ny tenako dia halefako eto ny fanavaozana azy ary koa ny fomba marina hanavaozana azy.
Salama, fanontaniana iray, miasa ve ity efitrano ity amin'ny maodely Lg G2 D-806? MISAOTRA
Heveriko fa tadidiko fa avy amin'ny installer dia manome anao safidy hisafidianana ny maodelinao G2, na dia mbola tsy nanandrana azy aza aho. Izany no antony anolorako ny backup nandroid ary raha manana olana ianao dia avereno izany ary paska masina.
Miarahaba ny namako
Christian R dia hoy izy:
Pancho eo anelanelan'ny efitrano sy One Plus's, samy ho an'ny G2, iza amin'ireo no tianao?
Valiny tamin'i Cristian R
Tsy isalasalana fa ny Cloudy G3 ho ahy no tsara indrindra hatreto.
Nanaraka ny dingana fametrahana rehetra aho ary tsy mandeha ny finday, mijanona amin'ny logo LG sy ny flashing led
Misaotra anao mamaly an'i Pacho, eo anelanelan'ity efitrano ity sy ny One Plus ho an'ny LG2 iza no tianao?
Ho ahy ny ROM tsara indrindra misy. Vaovao aho amin'ity ary sambany aho
ary mijery tutorials ary tsara ho ahy izany. Manoro hevitra ny hametraka an'ity ROM ity aho, tsy nanana olana tamin'ny dingana rehetra. Lahatsoratra tena tsara 😀
Misaotra namana, manome toky anao aho fa raha vao nirehitra io dia tsy izao no fotoana farany handrehitra ny LGG2 anao.
Miarahaba namana ary tongasoa ato amin'ny klioba.
Salama, tiako ho fantatra raha mifanaraka amin'ny LG G2 d805 (kinova amerikanina latina) io rom io misaotra betsaka anao ihany 🙂
Azonao atao ny mizaha toetra azy amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fanarenana sy ny fisafidianana ny Safidy fametrahana nefa tsy manao ny mamafa aloha, ary rehefa misokatra ny fofona napetraka dia azonao atao ny manamarina raha manome anao hisafidy ny maodelin'ny LG G2 ianao nefa tsy mila mametraka azy. Raha manapa-kevitra ny hametraka ianao aorian'izay satria ny maodelinao dia ao amin'ny lisitry ny maodely mifanentana aminy, tadidio fa tsy maintsy hivoaka ny installer Aroma ianao, avereno amin'ny Recovery Mode ary manomboka eo am-piandohan'ny tutorial manao ny mamafa rehetra ilaina, raha tsy izany manome anao olana maro.
Salama, hitako fa namoaka ny Cloudy G3 1.3 izy ireo, ary tiako ho fantatra ny fomba ahafahako manavao ny ROM. 😀
Juan Carlos Cervantes Cornelius dia hoy izy:
Salama Francisco, apetrako aminao izao fanontaniana manaraka izao: manana LG G2 F320l Koreana aho ary te-hanao ny fampianaranao… Nahita ireo tranga ireo ve ianao? Misaotra anao
Valiny tamin'i Juan Carlos Cervantes Cornelio
Francisco, omaly ny OptimusG3 rom dia nohavaozina ho 1.3.1 Nampiasa 1.2 aho ary niasa tamim-pahombiazana, tsy fantatrao eo cloudyg3 sy optimusg3 rom hoe iza no tsara indrindra?
Mamaly an'i JuanFra
Ho an'ny Cloudy G3 tsy misy fisalasalana.
Salama, manao ahoana ny fiainana bateria amin'ity ROM ity? Manana D805 aho ary ampiasaiko amin'ny LTE band 7 (2600 MHz). Misaotra anao.
Nametraka ny Cloudyg3 1.3 aho ary tsara izany, tao antutu dia nahazo 37500 Lg G2D805 aho
Salama Francisco, tapaka ny rohy fampidinana ROM, na izany aza dia azoko tamin'ny pejy iray hafa, nametraka azy aho manaraka ny fombanao ary tsara izany. Tsy tiako ny lokon'ny interface radio sy ny fiasa vitsivitsy amin'ny fakan-tsary, ankoatr'izay tsy manan-tsafidy hanavao izy. Tsy haiko raha ilay Rom ihany no amporisihinao anay.
Salama fanontaniana iray. Satria tsy manana solosaina aho, azoko atao ve ny misintona azy ireo mivantana amin'ny findaiko ary mampirehitra azy ireo?
Fenoy ny hevitro teo aloha ... vitsy kokoa ny fiasan'ny fakantsary fa ny maranitra sy ny kalitaon'ny sary dia mahatalanjona tanteraka. Mbola manana ny fisalasalako ihany aho, ahoana no ahafahantsika manavao ny kinova 4.4.4. Ho an'ny ambiny, haingana be ny telefaona. Christian azonao atao ny misintona ireo rakitra amin'ny alàlan'ny findainao mivantana any amin'ny SD Card, ny tena zava-dehibe dia ny tsy mamoaka ny zip ary mifamadika ny telefaona teo aloha ary mirehitra ny TWRP Recovery. Ny fizotry ny fametrahana dia tsy miovaova, araka ny nasehon'i Francisco vantany vao miverina amin'ny laoniny isika.
Efitra tena tsara farafaharatsiny ny kinova V3 izay nofidiko! tsara
Vao nametraka azy aho. Tena tsara, saingy tsy manana tamba-jotra aho, ary koa tsy manome ahy ny mety ho 4g.
Etsy ankilany, izay ahitako ilay baseband Movistar, heveriko fa tadidiko fa nanavao azy io aho roa herinandro lasa izay, ary ny iray tonga eto dia ny volana martsa. MISAOTRA
Ho an'ireo rehetra mikasa ny hametraka ity Rom ity. Raha mpampiasa Movistar ianao ary mankafy fifandraisana 4G (Espana) dia aza atao izany, satria mampifandray mivantana amin'ny LTE izy io, ary ny safidy 2G / 3G / 4G tianao dia tsy mamela anao ny rom, toy ny amin'ny stock.
Nanandrana ny OptimusG3 sy EUREKA!, Namaha ny olako tamin'ny fikarohana tambajotra tsy manam-petra aho.
Manantena aho fa hanampy anao amin'izany.
Nampiasa clodyg3 1.3 nandritra ny andro vitsivitsy aho ary tena faly amin'izany, saingy androany aho nanana reboots 2 tsy nampoizina, misy vahaolana amin'ity Francisco ity?
Toy izany koa no nitranga tamiko tato anatin'ny roa andro. reboots tsy ampoizina.
lazkan dia hoy izy:
Alejandro, mivoaka amin'ny LTE izy io nefa mitovy amin'ny 4G amin'ity tranga ity. Ary ny rom dia mamela ny hanova ny safidin'ny 2G / 3G / 4G, amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby.
Jose maria rodriguez dia hoy izy:
avy aiza no ahafahako misintona an'ity rom ity?
Valiny tamin'i Jose Maria Rodriguez
Ao amin'ny lahatsoratr'ilay lahatsoratra dia manana ny rohy ianao.
Ernest Gutierrez dia hoy izy:
Salama maraina Francisco, omaly nametraka ny CloudyG3 v2.0 rom farany aho, mandeha tsara daholo ny zava-drehetra, ny hany zavatra tsy tiako dia ny tsy nametrahako ny fakantsary fakan-tsary an'ny Lg G2, fa ny widget amin'ny famantaranandro eo amin'ny efijery hidin-trano dia mainty, izany ihany, amin'ny fomba mitovy ihany no tiako ahalalako raha misy fomba fametrahana ny fakantsary fakantsary an'ny LG G2 satria miaraka amin'ny mod XCAM ny safidy hampavitrika ny stabilizer dia tsy hiseho rehefa maka sary ny horonantsary ary raha tsy ela dia ianao hainao ny manova ny lokon'ny widget amin'ny famantaranandro amin'ny efijery hidin-trano, misaotra
Valiny tamin'i Ernesto Gutierrez
Ry malala ao anaty fonosana G2 D802 vaovao dia tsy maintsy apetrakaiko aloha ity Cloudy G3 1.2 ity ary avy eo havaozina amin'ny V2.0 na azonao atao ny mametraka ny kinova 2.0 mivantana amin'ny G2-ko, ary raha izany dia aiza no ahazoako ilay kinova V2.0 ?
Misaotra anao mamaly an'i Pancho, noho izany ny fizotran'ny fametrahana dia mitovy amin'ilay natao tamin'ny Rom Cloudy G3 1.2 V2 ??
Marina izany, mitovy tanteraka.
Misaotra ary apetraho fa mandeha lavorary izy io, ankehitriny tsy maintsy manao zavatra amin'ny bateria ianao amin'ny fiasa tonga lafatra? Toa nilaza tany ivelany izy ireo fa tokony hampiasa programa handefasana azy io na zavatra toa izany. Misaotra hatrany Fran
Nametraka ny kinova 2.0 ihany koa aho, mandeha tanteraka izy io, misy fahasamihafana misimisy ao amin'ny interface tsara, ho tsara kokoa. Ny reboot tsy ampoizina dia toa namboarina tamin'ity famotsorana ity.
Efa napetraka dia mandeha lavorary, ny olana indraindray ny browser dia manokatra pejy indraindray tsy, miaraka amin'ny wifi na miaraka amin'ny plan data, ary koa ny olana amin'ny batterie, ny bateria dia lany tao anatin'ny 3 ora sy sasany ampiasana, METY AMIN'NY 100% dia mahazatra?
Salama Francisco, tiako ho fantatra hoe iza no quernel tsara indrindra ho an'ity rom ity ary ho an'ny d805 satria hitako fa tsy manana fizakan-tena tsara ny bateria na raha misy fomba fanatsarana azy. Misaotra anao.
brianburstein dia hoy izy:
Ernesto, azonao atao ve ny mamaha izany? izany koa no mahazo ahy!
Mamaly an'i brianburstein
Mandalo! Misaotra anao
Sheldon dia hoy izy:
Salama Francisco, nametraka ny CloudyG3 2.0 sy mahafinaritra aho, saingy tiako ho fantatra hoe inona no tena tadidiny, rehefa mandeha mitahiry ireo angon-drakitra momba ny rafitra manome ahy 4,96Gb aho, tsy be loatra ve izany? ? ny ahy dia 16GB. Tsy haiko raha nanao ratsy aho.
Etsy ankilany, tsy haiko raha hamafa ny backup izay efa notehiriziko tao amin'ny kapilao sy dropbox. Tsy haiko ny fandehany amin'ny usb mankany amin'ny folder TRWP Restore.
Valiny tamin'i Sheldon
Salama maraina, manana fanontaniana aho, manana cloudyg3 version 2.0 napetraka aho ary ny zava-misy dia mahafinaritra ary te hanontany anao aho fa mitsambikina irery ireo fanavaozana na ahoana no ahafahanao manavao na inona ny dingana harahina, antenaiko fa azonao atao ny manazava izany fanontaniana izany amiko.
Salama, nanaraka ny dingana rehetra aho tamin'ny lg g2 d802 faka ary niaraka tamin'ny twrp, tsara daholo ny zava-drehetra fa rehefa nanomboka ny telefaona dia nijanona teo amin'ny logo lg niaraka tamin'ny flashing led.
Niezaka ny nametraka nomaniny ho solon'izay tamin'ny pc aho tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny telefaona tamin'ny fomba fampidinana fa ny finday dia tsy miseho amin'ny pc ary tsy afaka mametraka rl backup aho ... Nanandrana izany tamin'ny alàlan'ny usb \_ otg aho ary hita, fa manome ahy foana tsy mahomby, md5 tsy misy rakitra
Hatramin'izay dia azoko foana izany,
Tsy misy fomba fametrahana ny ZIPS na ny cloudy g3, na ny optimus g3 na ny efitrano 7 ...
Ny hany zavatra azoko apetraka dia ny cyanogenmod 11, satria tsy mamela ahy ny 11S
Miaraka amin'ny cyanomodgen 11 dia mametraka rakitra md5 hita ihany koa izy io, saingy na izany aza dia mametraka sy miasa tanteraka izy, afaka nametraka ny fampiharana cyanomodgen 11s (fakan-tsary sy galeriana vaovao, equalizer ...) ary miasa tsara izy ireo ... saingy any Tsy misy fomba hametrahana efitrano hafa
Na ny stock aza tsy azoko atao amin'ny lafiny rehetra ...
Misy mahalala sy manampy ahy hanamboatra an'ity lesoka ity azafady?
Tsy hoe tsy tiako ny cyanomodgen 11, ny marina dia rehefa avy nandinika azy tsara aho ary nanamboatra azy araka ny itiavako azy, dia saika tsy mampaninona ahy ny mampiasa an'io ... saingy tsy te hiezaka bebe kokoa aho ary azoko atao ny mametraka ny fiandohan'ny g2 raha ilaina izany
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia voamarika mazava tsara fa ny fametrahana dia tsy maintsy atao ao amin'ny Philz Touch Recovey izay napetrako tao amin'ny ZIP. Mba hamahana ny olanao, ny hany zavatra eritreretiko dia ny fametrahana ny zip Philz Recovery avy amin'ny Recovery TWRP tenany, araka ny nohazavaina tamin'ilay lahatsoratra ary avy eo dia hamerenanao amin'ny mode Recovery ary avy amin'i Philz dia andramo esorina indray ny Miui Rom, izay azo antoka fa Tsy manome anao olana isan-karazany intsony aho.
Ok, fa niaraka tamin'ny MIUI izany, sa tsy izany?
Miaraka amin'ny rahona koa?
Eny, miala tsiny, fa zavatra iray azonao andramana jerena raha olan'ny fanarenana izany hoe manana kinova efa lany andro ianao na zavatra toa izany.
Ok misaotra, nahazo fotoana mangina aho ary manandrana manana izany raha misy ny vintana
Holazaiko aminao zavatra
Tsy misy namana amin'izany.
Francisco, tolak'andro tsara, tiako ho fantatra raha tsy ela dia fantatrao ny fomba hametrahana ny fakantsary fakan-tsarin'ny LG G2 amin'ity rom ity, fa tsy ny XCam, satria tiako ny hamerina ilay safidy anti-shake izay hita rehefa maka sary video ary very io Option io ao amin'ny XCam ary tsy haiko raha misy fiatraikany amin'ny fotoana fakana horonantsary sy ny fahombiazan'ny optimal stabilizer ny Safidy, misaotra ary miala tsiny amin'ny fanelingelenana.
joelfarias63 dia hoy izy:
rehefa manomboka amin'ny maody fanarenana amin'ny d805 aho dia miala tsiny ny rohy cloudi rom nidina, avy aiza no ahafahako misintona azy
Mamaly an'i joelfarias63
John David Chaparro dia hoy izy:
Miarahaba an'i Francisco avy any Colombia Te-hanontany zavatra iray aminao aho fa manana an'io efitrano io ao amin'ny LG G2 D805 »CloudyG 2.1 KOT49I» dia tsy manana tamba-jotra 4G LTE ary hitako tao amin'ilay horonan-tsary fa afaka voarakitra ireo antso fa tsy azoko ireo safidy ireo , afaka manampy ahy ianao
Valiny tamin'i Juan David Chaparro
Miarahaba an'i Francisco avy any Kolombia Te-hanontany zavatra iray aho fa manana an'io efitrano io ao amin'ny LG G2 D805 "CloudyG3 2.1 KOT49I" aho
Andrasana ny fanavaozana ny rom hamahana ireo zavatra 2 kely ireo
Tsy takatry ny tamba-jotra 4G LTE
ary tsy hitako ny safidy handraketana antso, tsy ao izy
Miaraka amin'ilay romana efa 2 andro aho hatreto, mandeha tsara ny zava-drehetra, tsy nahita bibikely na tsy fahombiazana aho, miandry fotsiny izy ireo hanampy ny safidin'ny
Antsoy ny firaketana
Mihaino tsara ny hevitrao ...
Tsara ny tolakandro Juan, zavatra maro no holazaiko aminao, ny voalohany dia ny famaritana ny Rom CloudyG3 dia hita ao amin'ny horonantsary fa ny kinova iray teo aloha dia tokony hanoro hevitra ny hametraka ny version 2.0 aho, afaka manome toky anao aho fa tsy manana an'izany olana izany satria izaho dia avy any Kolombia ihany koa, manana fitaovana mitovy amin'izany aho ary mampiasa V2.0, amin'ny 4g dia tsy maintsy mamafa ny app LTECONFIG ianao ary manomboka indray ary voila, miseho ny safidin'ny 2G / 3G / 4G, manoro hevitra aho ny hanova azy satria ny kinova 2.1 dia tena vaovao ary tsy maintsy miandry ny bibikely lazain'izy ireo isika mba hahafahan'izy ireo manitsy azy ireo.
Sambatra ny tolakandro.
juanparedes001 dia hoy izy:
Salama hariva, atolotra ahy miaraka amin'ireto bibikely manaraka ity miaraka amin'ity rom ity aho, rehefa miantso amin'ny alàlan'ny fifandraisana rehetra izay ananako ao amin'ny lahatahiry, ao anaty tsanganana antso dia miseho ilay isa fa tsy ilay anarana, toa tsy nisy izany. nampiana an-telefaona ..., ary mitovy amin'ny lozantsary hafatra, ny nomeraon-telefaona ananako ao amin'ny reperitoirako dia mandefa lahatsoratra amiko, ary miseho ilay isa, tsy miseho ny anaran'ilay olona, ​​toy ny hoe tsy namonjy azy, manelingelina ity bibikely ity…
Mamaly an'i juanparedes001
Mirary alina ry Juan, hanoro hevitra anao aho mba hamafana tanteraka ary hamerina hametraka ilay rom indray satria mamaha olana izany amin'ny ankapobeny rehefa misy ny fametrahana romotra ratsy ary raha ny nolazaiko tamin'ny mpiara-miasa etsy ambony dia ny V2.0 no dikan-teny atoro indrindra. satria ny V2.1 dia tena vaovao ary toa manana bibikely maromaro, antenaiko fa hanolotra anao ny soso-kevitro.
Salama, misy mahalala ny fihaonambe amin'ny cloudy g3?
Amin'izao fotoana izao dia omeko izy hanisy antso raha mbola miresaka amina olona iray aho, miantso izy ary rehefa noraisin'ny hafa dia avelany am-pijanonana ny antso voalohany, mandra-pahatongan'izay rehetra ara-dalàna, ny olana dia ny safidy hiditra na hanambatra ny antso dia tsy tonga, na farafaharatsiny tsy marina aho, miaraka amin'ny efitrano fitahirizana dia vita mora foana izany, ary tena ilaiko maika izany noho ny antony miasa, mahamenatra ny mijanona tsy mampiasa cloudy g3 tiako, ary manome 34400 isa aho amin'ny antutu fotsiny ho an'ity
Salama, manana fanontaniana aho raha manova ny rom ho G2 ahy izay navotsotra (tsy an'ny orinasa), ho very ve ny famotsorana ahy? azafady misy olona mahalala afaka manampy ahy, misaotra mialoha
Salama daholo, vao avy nametraka ilay kot2.1i v49 rom aho, mandeha tsara io nefa hitako fa mandany haingana kokoa noho ny mahazatra ny bateria, avy amin'ny jellybean aho ary maharitra mandrakizay miaraka amin'ny WiFi na data ny bateria, izao fantatro izao fa mitete roa be amin'ny roa isan-jato, manana kinova iraisam-pirenena aho d805. Zavatra iray tsikaritro ihany koa fa ny sensor akaiky dia tsy mandeha tsara ary tsy mandeha mihitsy ilay gyroscope. Ampio por fa ... Mety hanapa-kevitra ny hamerina ny Stock ianao. Fa tiako ity ...
Roberto H dia hoy izy:
Salama, manana modely LG G2 D800 aho, hiasa ho anao ve izany rom izany?
Mamaly an'i Roberto H
Andrewfks dia hoy izy:
Miarahaba anao Francisco.
Toa nesorin'izy ireo ilay rakitra ROM tamin'ny rohy napetrakao.
Azonao atao ve ny manampy ahy amin'ny fomba rehetra hahafahako maka ilay kinova mitovy?
Valiny tamin'i Andrewfks
Efa misy kinova vaovao ary manjavozavo g2 2.2 ankehitriny fa tsy cloudy g3
Sintonina ao amin'ny forum xda izy ary mirentirenty
Salama tsara ry andro tsara, rehefa nametraka an'io kinova io ianao dia tsy nanome olana anao? Nametraka azy aho ary manana ny olana fa rehefa maharay antso sy miantso aho dia tsy mahazo ny anaran'ilay olona, ​​ny isa fotsiny, dia toy izany koa ny amin'ny hafatra an-tsoratra, raha afaka manampy ahy amin'izany ianao, azafady, misaotra anao ary arahaba avy any Venezoela ...
Valiny tamin'i Francisco Ortiz
Pol dia hoy izy:
raha te hanana tambajotra 4g dia tokony hofafanao amin'ny rindranasa (lte config mino aho) miaraka amin'ny root explorer, ity fampiharana (lte config) ity dia ao anaty fampirimana system / app, handraisana ireo antso tokony hamelomanao ity safidy ity amin'ny toe-javatra iantsoana.
Mamaly an'i pol
Salama tsara, nametraka ny ROM cloudyg2 2.2 izay nakariko tao amin'ny pejy XDA aho, saingy manana olana aho fa rehefa miantso sy mandray antso dia tsy fantany ny fifandraisako ary ny isa fotsiny no miseho, dia toy izany koa no mitranga amin'ny hafatra an-tsoratra, inona no afaka Ataoko milamina ?? Ampianaro, azafady….
oswaldo bracho dia hoy izy:
Salama Francisco nametraka ny romotra G2 2.2 rom aho ary zavatra mitovy no mahazo ahy c, ny anaran'ny mpifandray dia tsy miseho amin'ny antso na ny tantara ary kely kokoa ny hafatra, ampahafantaro ahy raha manana vahaolana ianao
Mamaly an'i oswaldo bracho
Azo antoka ry rahalahiko, raha mahita vahaolana aho dia hampahafantariko anao ...
Henry Espino dia hoy izy:
salama maraina, ity kinovan'ny rom ity dia mifanaraka amin'ny G2-ls890
Valiny tamin'i Enrique Espino
gargon_66 dia hoy izy:
Salama Francisco sy Oswaldo, zavatra mitovy aminao no mitranga amin'ny cloudy G2 2.2, koa raha mahazo ny vahaolana ianao dia alefaso amiko ary misaotra mialoha.
Mamaly an'i gargon_66
Edison Fernandez dia hoy izy:
Miarahaba ahy manana olana mitovy amin'ny fanavaozan'ny mpampiasa maro ny v2.2 aho ary tsy fantany ny fifandraisana rehefa miantso aho ary miantso ahy toy izany koa izy ireo ao anaty lahatsoratra na dia tsy misy vahaolana aza?
Mamaly an'i edicson fernandez
Nisy nanandrana izany ve ianao ary afaka mampita ireo rohy fampidinana azafady
Salama namana, mampahafantatra anao aho fa rehefa avy nampiasa ny claudyG2 2.2 ROM ny traikefa dia tsara fa tsy tsara satria mandeha tsara ny tetezamita, saika tsy misy lagy, tsara tarehy be ny endriny minimalist, indrisy fa tsy maintsy nanova ROM aho noho ilay bibikely lehibe amin'ireo antso sy andinin-tsoratra izay tsy mahalala ny fifandraisana, reraky ny famotopotorana aho ary tsy nahita ny vahaolana, nalahelo aho nanala azy satria tiako be izany, mampiasa Cyanogemod 12 aho izao, miorina amin'ny lollipop android 5.0 madio ary ny tena marina dia mandeha tsara ny ROM na dia dikan-alina aza, afa-tsy hadisoana bitika kely vitsivitsy aseho nefa tsy misy tokony hatahorana, mamporisika azy aho, arahaba avy amin'ny nosy Margarita / Venezoela ...
Salama Francisco, nampiasa cloudy G2 2.2 aho hatramin'ny nivoahany ary tsy mbola nanana olana na dia iray aza aho, na tamin'ny antso na tamin'ny fifandraisana ... na dia marina aza fa tsy ianao irery no sendra izany. ity, efa henoko mihoatra ny indray mandeha, tsara vintana aho, mandraka androany tsy mbola nisy lesoka kely na kely aza tamin'ny 2.2 na tamin'ireo teo aloha.
Raha ny marina dia miandry ny hanandrana 3.0 amin'ny lollipod aho satria toa toy ny efitrano tsotra v1.1 manana fatiantoka fandrakofana sy bibikely hafa, aleoko miandry kely kokoa raha hahavaha azy ireo
Cm12 dia tantara ratsy, efa nanandrana aho ary tena mandaitra tokoa
Ivan droguett dia hoy izy:
Salama namana, apetraho ny efitrano fa tsy mandeha amiko ilay 4g, inona no azoko atao ????
Valiny tamin'i Ivan Droguett
Ry namako, tsy afaka namaly ny fanontanianao aho satria tsy mampiasa 4G ny fireneko, fa kosa tokony hanoro hevitra ny hamafana ny ROM aho ary hamerina azy io indray ...
ry namako dia narahiko daholo ny dingana rehetra fa rehefa nametraka ilay rahona ... dia lasa 1% ka hatramin'ny 100% tao anatin'ny 2 segondra ... ary maty ny telefaona finday ... ny G3 ... ary hatreto dia mbola tsy nivadika amin'ny ... ny fampidirana sary mihetsika dia tsy miseho rehefa ampifandraisiko ... tsy miditra amin'ny fomba fampidinana ... na fomba fanarenana ... tsy manao na inona na inona ... maty tanteraka ... rehefa ampifandraisiko amin'ny pc dia mivoaka ao amin'ny port COM ... inona no azoko atao ... ampio aho azafady
Andro tsara namana, amin'ny zavatra vakiako manana anao g3? Raha izany no izy dia nahatonga ny antsoin'izy ireo hoe "biriky" tamin'ny findainao ianao satria ny rom cloudy dia an'ny LG g2 ihany, jereo ao amin'ny YouTube ny fomba famadihana ny LG, manantena aho fa afaka mamaha ny namanao manana olana ianao ...
Ry malala apetraho ity rom ity fa hitako fa mihoampampana ny telefaona ary hitako fa mandany izay mety ho vahaolana ny bateria, misaotra
Salama namana, raha be loatra ny hafanana, mety misy ny hetsika atao any ambadika izay mametraka ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha ary ny bateria, tsy mbola fantatro hoe maninona no laniana haingana kokoa, heveriko fa mandany loharano be ny faka. avy any amin'ny tlf dia mitovy amiko ny zava-nitranga, heveriko fa izany no antony! Manoro hevitra anao aho mba hampidina "CC CLEANER" ary manadio ny RAM tsy tapaka izay manampy anao amin'ny bateria sy ny hafanana be ...
PS dia hoy izy:
Tsara, tsara .. Rehefa avy namaky sy namaky tamina forum maro aho dia nahita ity rom ity dia nametraka Cloudy 2 tao amin'ny LG G800 D2.2 AT&T-ko. Ary tsy misy isalasalana fa io no tsara indrindra, dia toa LG ihany fa tsy misy na inona na inona avy amin'ny AT&T, ny fanamboarana dia tsy raharaha lehibe ary manana tombony be dia be izany raha oharina amin'ilay kinova izay tonga amin'ny telefaona toa tsy dia misy dikany amiko. $% & = »@ .. Izaho dia namaka tamin'ny faka faka. Raha tsy manongotra azy ireo ianao amin'ny fanandramana voalohany dia hanome soso-kevitra ny fakan-kery izy, ataovy izany tsy hatahotra. Rehefa manana faka ianao, mitadiava fomba hametrahana fanarenana mahazatra mba hahafahanao mametraka an'i Gloudy G3 2.2 (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2783192).
Tena niasa tsara ho ahy izy io, tsy nisy lag na bug nandritra ny iray volana sy tapany. Ny pitsopitsony hitako fotsiny dia ny an'ny fifandraisana, rehefa avy nitety ny manodidina aho dia hitako fa mila mametraka rom fotsiny ianao fa tsy misy simcard ao anaty telefaona. Androany, sosotra tamin'ny tsy nahalalako hoe iza no miantso, nataoko izany ary ny zavatra tokana dia tsy maintsy averiko indray ilay app fa nandaitra. Ny olan'ny 4G any Venezoelà amin'ny tranga iray .. Tamin'ny voalohany dia nahita 4G (niaraka tamin'ny malefaka tany am-boalohany) fa taty aoriana niaraka tamin'ny H + rahona ihany, heveriko fa ny zava-dehibe eto dia ny fomba tsy maintsy hamantaran'ireo kinova rindrambaiko roa ilay tambajotra. , indrindra tsy mbola hitako ny fiovan'ny hafainganam-pandehanako milaza fa teo aloha raha manana LTE ianao (izay mihevitra fa 4G) sy H +. Ilaina ny miditra amin'ny faritra misy fandrakofana LTE hahitanao ny fomba amaritan'ny telefaona ny tamba-jotra, araka ny filazan'i Movistar ao an-tanànako mbola tsy misy.
Manantena aho fa afaka manampy. fiarahabana
Valiny amin'i PS
guille rivero dia hoy izy:
Raha mino an'io ps io aho. Hizaha toetra azy amin'ny faritra 4g aho hahitako izay mitranga. Satria mitranga amiko fa tsy mivoaka koa ny famantarana 4g. Tsy maintsy izany no antony ka raha vao manaporofo azy aho dia maneho ny valiny.
Mamaly an'i Guille rivero
Marco Carías dia hoy izy:
Salama maraina, nametraka ity rom ity aho, saingy tsy afaka mijery ny galerin'ny sary na horonan-tsary, mamoaka hafatra hoe "Mampalahelo fa nijanona ny Gallery" azoko atao hamahana ity olana ity
Valiny tamin'i Marco Carias
Fanontaniana, apetraka miaraka amin'io rindrambaiko io, raha sanatria ka mahatratra ny fanavaozana lolipop, afaka hametraka ve izy io?
Salama, manao ahoana ianao sakaiza, matahotra aho fa tsy azo atao ny manavao amin'ny fomba ofisialy ny solosainao satria efa miorim-paka izy ...
Jesus Barron Ivory dia hoy izy:
Fanontaniana iray no apetrako ao amin'ny lg g3.3 ny kinova 2, mandeha tsara daholo ny trabones sasany fa tsy misy zavatra hafa, ny olana lehibe ananako dia ny fampiasana ny rantsan-tànana 2 hanatonana, ny hidin-trano ary mila manidy sy mamoha ny finday hitazomana azy aho miasa, olon-kafa no nanana an'io olana io ary ahoana no fomba hamahako azy? Izany dia mitranga amiko ao amin'ny galeriana, sary, fakantsary, mpitety, ny hetsika fanatobiana zoom no manome olana ahy.
Ankasitrahako ny hevitrao-
Valiny tamin'i Jesus Barron Marfil
Salama manana lg g2 miaraka amin'ny android 5.0.2 aho. Te hanana ny toetran'ny g3 aho. Inona no romana atoro anao sy ireo dingana tokony harahina? Misaotra betsaka
Tena fanampiana lehibe izany
Ho hita ny 18 aogositra ny fehin-tànana marani-tsaina Xiaomi Mi Band
Tsy manohana ny Android 2.2 Froyo intsony ny Skype Inona no hitranga raha manaraka ny maodely daholo ny fampiharana rehetra?